Isithintelo soMphunga, iFilimu eReflective, iMembrane ephefumlayo-JiBao
I-membrane engangeni manzi kunye nephefumulayo luhlobo olutsha lwezixhobo zepolymer ezingenamanzi.
Kukho iindlela ezintathu ezisisiseko zokufudumeza ubushushu: ukuhanjiswa kobushushu, ukuhanjiswa, kunye nemitha.
ukusukela umgangatho ongcono
I-Hebei Jibao Technology Co., Ltd. ikwiSithili esitsha sase-Xionng'an kwi-hinterland yaseBeijing-Tianjin-Hebei, enendawo entle kunye nokuhamba ngokulula. Namhlanje, xa ihlabathi likhuthaza ukugcinwa kwamandla kunye nokukhuselwa kwendalo, kunye neteknoloji yokuvelisa iklasi yokuqala kunye neenzuzo zoshishino, iyingqayizivele kwishishini lezinto zokwakha eziluhlaza.
Inkampani yethu igxile ekuveliseni iinwebu ezingangeni manzi kunye neziphefumlayo, iimbrane zokuthintela umphunga ezingangeni manzi, iphepha lokuphefumla, kunye nenwebu ezingangeni manzi kunye neziphefumlayo.
I-membrane engenamanzi kunye nephefumlayo ludidi olutsha...
I-Jibao isithintelo segesi inwebu ayinamanzi, ifumile...
Le filim ye-4-layer yokwenziwa kophahla lwenziwe ...
Zintathu iindlela ezisisiseko zokudlulisa ubushushu: yena...
Inkampani yethu inobuchwephesha, obukumgangatho ophezulu, obusekwe kumgangatho ophezulu, kwaye inguvulindlela ekuphuculeni okuqhubekayo kunye noyilo lwemveliso entsha, kwaye ineentengiso ezomeleleyo kunye neqela lenkonzo emva kokuthengisa, ilandela abathengi kuqala.
Isithintelo soMphunga kuMacala omabini eInsulation, IVinyl Plank yoMgangatho woMvalo woMvalo, Froth-Pak, Umgangatho ongaphantsi koMgangatho woMphunga, Umgangatho wangaphantsi odadayo, Ilaphu elingalukwanga,